ज्याकेट खोल्न हिरोइनको अटेरी ~ The Nepal Romania
काठमाडौं, माघ ३ (नागरिक)- वसन्तपुरमा शनिबार साँझ हिरो राजवल्लभ कोइराला पातलो कमिजमा देखिए। चिसोले गर्दा उनी लुगलुग काम्दै थिए। फिल्मको सुटिङ थियो। नत्र उनले किन सहन्थे र त्यस्तो चिसो! 'प्रीतिको फूल' भन्ने फिल्मको सुटिङमा हिरोइन युना उप्रेती र केही झ्याप्ले फाइटरहरू पनि थिए। फाइटरहरूले हिरोइनलाई लखेट्दै गर्दा हिरोले सुरक्षा दिने दृश्य खिच्ने दाउ फाइट डाइरेक्टर योगेन्द्र श्रेष्ठको थियो।फाइटरहरू युनालाई लखेट्न तयार भए। तर, उनीहरू सबै बाक्ला ज्याकेटमा थिए। हिरो जाडोमा कमिजमात्र लगाएर बस्ने, भिलेनहरू र हिरोइन चाहिँ ज्याकेटमा! राजवल्लभलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक थियो।
सुटिङ सुरु हुनै लाग्दा उनले फाइट डाइरेक्टर योगेन्द्रसँग प्रश्न गरे, 'दिउँसो सुन्धारामा दौडिँदा चाहिँ पातलो लुगा, अहिले चाहिँ बाक्लो?' पछि फिल्ममा नमिल्दो देखिने हुनाले सबैले ज्याकेट खोल्नु पर्ने सुझाव राजवल्लभले दिए।योगेन्द्रलाई कुरा चित्त बुझ्यो। उनको एक चुड्कीमा सबै फाइटरहरू ज्याकेटविहीन बने। हिरोइन युना चाहिँ आनाकानी गर्दै थिइन्। उनले ज्याकेट खोल्न नमान्नुको कारण पनि धेरै बेर लुक्न सकेन।'हिम्मत-२' फिल्ममै लगाइसकेको धर्के टिसर्ट देखिने हुँदा युनाले ज्याकेट खोल्न नमानेकी रहिछन्। राजवल्लभ पनि के कम? उनले ठट्टा गरे, 'एउटै हेयर स्टाइलको भरमा राजेश हमालले रजाइँ गरेको २० वर्ष भइसक्यो, तिम्रो टिसर्ट दोहोरिँदैमा के हुन्छ र!'योगेन्द्रले पनि कर गरेपछि युनाको केही लागेन। उनलाई ड्रेसम्यानले भ्यानभित्र लगे। सायद, टिसर्ट बदल्न होला। भ्यानबाट हिरोइन त्यही टिसर्टमा फर्किन् वा अर्कै ?हिरोइनको टिसर्टप्रति चासो देखाउनुभन्दा 'पेट पूजा' गर्नु उचित लागेपछि यी सबै दृश्यका प्रत्यक्षदर्शी नागरिक का ग्राफिक डिजाइनर घरतिर लागे।